ကြိုက်နှစ်သက်တာလေးတွေကိုကူးယူပြီးရင် တော့ ရေးသူနာမည်လေးထည့် ပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
ခရမ်းရောင်ရှိသောကန်စွန်းဥ - အသည်းကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုအတွက်နဲ့ ဆီးချိုအတွက်လည်း စားသုံးရန်သင့်တော်ပါတယ်။ Anthocyanin ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ဓာတ်တိုးခြင်းကို ထိန်းပေးပါတယ်။ သွေးတိုးခြင်းကို ထိန်းပေးတဲ့အတွက် သွေးတိုးသမားတွေလည်း စားသုံးသင့်ပါတယ်။
Posted by ရတီခင်ခင်ကြီး at 20:26 No comments:
ချွေးပေါက်ကျယ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ချွေးပေါက်လေးတွေ ဘာကြောင့်ကျယ်မှာ ဖတ်ပြီးလောက်ပြီနော်။ ခု ဒီစာကိုဖတ်တဲ့သူဟာ ချွေးပေါက်ကျယ်တွေရှိနေတဲ့သူလို့ ထင်ပါတယ်။ သင့်ချွေးပေါက်တွေဟာ မှန်ဘီလူးအောက်ရောက်နေသလို ကျယ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေလား??? စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေတဲ့ လွယ်ကူတဲ့နည်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ချွေးပေါက်လေးတွေ ပြန်ကျဉ်းအောင်က အပေါ်က ချွေးပေါက်ကျယ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်း သတိထားရပါမယ်။ ပြီးတော့ ချွေးပေါက်လေးတွေ ကျဉ်းသွားအောင် လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
Posted by ရတီခင်ခင်ကြီး at 20:20 No comments:
သွေးတိုးအတွ​က် လူလည်း ကျန်းမာ, ငွေလည်း သက်သာ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ တိုင်းရင်းဆေး ပညာနှင့်ပတ်သက်၍ ပညာပေးထားသော လူလည်းကျန်းမာ၊ ငွေလည်းသက်သာ ဆိုသော အားထားဖွယ်ရာ တိုင်းရင်းဆေးပညာအကြောင်းကို အများအကျိုးအတွက် ဆေးပညာဒါနပြုလိုက်ပါသည်။ လူကြီးလူရွယ်မရွေး ယခုအခါ အဖြစ်များသည့်ရောဂါမှာ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်သည်။ သွေးတိုးရောဂါ ကြာရှည်ဖြစ်နေပါက
Posted by ရတီခင်ခင်ကြီး at 20:18 No comments:
အမှန်ကတော့ ကျွန်တော်ရင်သားကင်ဆာအကြောင်းရေးဖို့ စိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူး။ Suewann က တင်ပေးဖို့ပြောလို့ ပါ။ ရင်သားကင်ဆာက သိထားသင့်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါ။ အမျိုးသမီးတွေကို အဓိကခြိမ်းခြောက်နေ တဲ့ ရောဂါတစ်ခုဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စောစောစီးစီး သိရှိရင် ထိထိရောက်ရောက် ကုသနိုင်တဲ့အတွက်
ဘယ်လိုသူတွေမှာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများသလဲ?
Posted by ရတီခင်ခင်ကြီး at 20:17 No comments:
ကင်ဆာ နှင့် ဒူးရင်းသြဇာ
ရေနွေးကြမ်း သောက်သလို သောက်လို့ရပါတယ်
ကျွန်မတို့ရုံးနှစ်ပတ်လည်အစည်းဝေးအတွက် နိုင်ငံအသီးသီးကတက်ရောက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက်ကျွန်မတွေ့တော့ တော်တော်အံ့အားသင့်သွားတယ်။ ဒီနှစ်စမှာဘဲ ဆေးစစ်တဲ့အခါ ကင်ဆာလို့ အဖြေ ထွက်ပြီး ကျွန်မတို့တစ်တွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ အခုပြန်တွေ့တော့ လန်းဆန်းကျမ်းမာ တက်ကြွ နေတော့ စကားစမြည်ပြောရင်းနဲ့ ဆေးနည်းလေး တစ်ခုရလာတာကို ဝေမျှခြင်လို့ပါ။
Posted by ရတီခင်ခင်ကြီး at 20:16 No comments:
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၅ နှစ်ကျော်က ဖြစ်သည်။ မြ၀တီစာပေတိုက်တွင် ကျွန်တော်အယ်ဒီတာချုပ် အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေချိန်က ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့တွင် ကျွှန်တော်နှင့်ခင်မင်ရင်းနီးသော ဆရာ ၀န်ကြီး ဒေါက်တာတင်အောင်သည်
ကျွန်တော်ထံသို့လာ၍ စကားစမြည်ပြောရာမှ ထူးခြားသောသူ၏ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ပြောပြသွားသည်။ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာတင်အောင်သည် ရန်ကုန်ဆေးရုံ ကြီးဓါတ်ရောင်ခြည်ဌာနတွင် တာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။
(ဆောင်းပါးနည်းနည်းရှည်သည် အချိန်သိပ်မရှိသော စာဖတ်ချစ်သူများ မိမိဘာသာမိမိ အပိုင်းအပိုင်း ခွဲ၍ ဖတ်ကြပါလေ)
Posted by ရတီခင်ခင်ကြီး at 20:01 No comments:
၁။ ။ဟေတုပစ္စယော- ဟိတ် (၆)ပါး ဖြစ်၍ ပစ္စယုပ္ပန် တရားတို့အား အမြစ်သဖွယ် ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရား။
(ဥပမာ)- ပညောင်ပင် အစရှိသည်တို့၏ အမြစ်သည် ထိုသစ်ပင်အား မြဲမြံခိုင်ခန့်စွာ တည်စေခြင်းငှာ ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့ ( လောဘ, ဒေါသ, မောဟ, အလောဘ, အဒေါသ, အမောဟ,) ဟိတ်(၆)-ပါးသည် ယှဉ်ဘက် သမ္ပယုတ်တရားတို့အား မြဲမြံခိုင်ခန့်အောင် အမြစ်သဖွယ် ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရား။
(ကျေးဇူးပြုသည်ဆိုရာ၌-မဖြစ်ပေါ်သေးသည်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသည်ကို တည်နေစေခြင်း၊ တည်နေသည်ကို တိုးပွားစေခြင်း တို့ပင်တည်း။)
(ဆောင်ပုဒ်)- ဖြစ်စေ တည်စေ တိုးပွားစေ ခေါ်လေကျေးဇူးပြု။ ။
Posted by ရတီခင်ခင်ကြီး at 01:13 No comments:
ကတ္တီပါခင်းတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တန်းကျတော့ ရတီခင်ခင်ကြီးရဲ့ ကန္တာရခရောင်းလမ်း
စိန်ပွင့်လေးတွေရဲ့အလေးချိန်ကို ရတီနဲ့တိုင်းတာချိန်တွယ်တယ် ရင်၌ဖြစ်ပေါ်လာသောခံစားချက် များဟာလဲစိန်ပွင့်တွေလိုပဲ အဖိုးတန်တယ် .. နာမည်က ..ခင်ခင်ကြီး ဒါကြောင့် ရတီခင်ခင်ကြီးလို့ ပေးဖြစ်ခဲ့တယ် ။။